Ogaden News Agency (ONA) – Jawaabtii Rasuulka CS ayaa ku filan culumada fadhi-ku-dirirka ah
Jawaabtii Rasuulka CS ayaa ku filan culumada fadhi-ku-dirirka ah
Posted by ONA Admin	/ December 16, 2012
Waxyaaba badan oon mudnayn in lagu mashquulo ayaa ku soo hormari intaynu ku jirno halganka aan aan kaga xoreynayno dalka cadawga dalka iyo diinta. Waxaana ka mid ah qaar badan oo shacabka ugu muuqda inay yihiin culumadii diinta ee Ilaahay uu faray inay dadka ku booriyaan iska caabinta cadawga iyo u adkaysiga jihaadka oo qaarkood u dhawaaqaya in la’isu dhiibo cadawga oo la joojiyo halganka taasoo la dhaafsanayo siday u dhigaan hadalkooda kama dabuaysta ah in laga badbaado dhibka cadawga iyo dilkiisa.
Dardaaran badan ayuu Rasuulka CS uga tagay umadda, wuxuuna ku yidhi intii la joogtay; Midkii I maqlow gaadhsii midka maqan. Waxaa ka mid ahaa dardaaranka Rasuulka CS waxyaabaha u keeni doona dulliga hadday ku dhacaan. Rasuulka CS wuxuu yidhi;
قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.
Xadiithkan wuxuu Rasuulka CS ugu sheegay umadda in hadday aduunyo daba socodkeeda ka doortaan jihaadka iyo ka hortagga cadawga inuu Ilaahay ku saladayo dulli iyo hooseyn aanay ka bixaynin ilaa ay diinta u soo noqdaan. Aad ayay culumada u sharxeen xadiithkan sababtoo ah waxaa ku cad digniin culus oo umadda haysata hadaanay ka waantoobin. Sheekha weyn Showkaani Allaha u naxariistee wuxuu yidhi; sababta dulliga u keenay waxay tahay marka ay ka tageen jihaadkii u keeni lahaa sharafta iyo korenta inuu Ilaahay ugu badalay dulli iyo hooseyn.
قال الشوكاني رحمه الله : “وسبب هذا الذل ـ والله أعلم ـ أنهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله ، الذي فيه عز الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله بنقيضه ، وهو إنزال الذلة بهم” انتهى .
Kooxaha sheeganaya culumada ee aadka ugu ololeeya in halganka ONLF la damiyo oo Itobiya la’isu dhiibo oo sida aadka ah u daleeceeya ONLF iyo halganka ay wado iyagoon marnaba ka hadlin dhibaatada uu cadawga u gaysanayo shacabka iyo faraxumanta gabdhaha walaalahooda ah iyo xaqiraada diinta islaamka ee EPRDF-ta ay ku hayaan Sunada, dhamaantood culumadaasi waa maalqabeen aad ugu dhex jira baayacmushtarka iyo dhismaha guryaha iyo beeraha. Miyaanay hadaba daba marin dardaarankii Rasuulka CS. Miyaanay ku dhicin dulligii uu Rasuulka uga digay? Naftooda say ugu qanciyaan been aan Ilaahay ka aqbali doonin waxay aad isugu hawlaan inay daleeceeyaan ONLF, taasoo ujeedada ay ka leeyihiin ay tahay in la joojiyo halganka oo sida saaxiibadoodii xarooday la’isu dhiibo cadawga, ka dibna ay shirakado iyo beero iyo aroos joogta ah ka helaan Ogadenya.
Waxaan aad u jeclaan lahayn inay culumada uu ka midka yahay Sh. Umal iyo kooxdiisa ay xadiithkaa u sharxaan umadda isla marahaantaan iska bari yeelaan in aanay ku dhicin digniintii Rasuulka CS marka ay wax ka sheegayaan jabhadda ONLF iyo halganka uu shacabka Ogadenya kula jiro cadawga Itobiya. Waxaa iman doonta maalin aanu qofna Ilaahay wax ka qarin doonin oo qofwalba wuxuu galabsaday laga abaal marin doono.